राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपले हाप्किडोलाई सबैमाझ चिनाउनेछ::Daily Newspaper of Nepal
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १४:०३
राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपले हाप्किडोलाई सबैमाझ चिनाउनेछ
नेपाल मार्शल आर्ट्स हाप्किडो संघ
नेपाल मार्शल आर्ट्स हाप्किडो संघ पछिल्लो समय नेपालमा सक्रिय खेलकुद संघको रुपमा रहेको छ । संघले आगामी कार्तिक १ र २ गते रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपको आयोजना गर्दैछ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर संघका अध्यक्ष कालीबहादुर घर्ती मगरसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप-
पहिलोपटक यस बृहद राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्न रोल्पा नै छान्नु भयो, यसको कारण के होला ?
साँचो यथार्थ के हो भने आम नेपाली जनसमुदाय, बर्ग र भुगोलको साचो प्रतिनिधित्व गर्ने नै खेलाडीले हो । काठमाडौं या अन्य शहरका खेलाडीहरू कारण मात्र नेपालको साख रहेको होइन । रोल्पा जस्तै विभिन्न जिल्लाका धेरै युवा खेलाडीहरूका कारण नेपालको खेलकुद टिकेको हो । भन्न खोजेको के हो भने रोल्पा, रुकुम, प्यूठान जस्तै नेपालका ग्रामीण भेगका सामान्य खेलाडीहरूका कारण हाम्रो साख जोगाएका हुन् । यस कारण प्रतियोगिता आयोजना गर्दा ठूला शहर र तारे होटल नै छान्नु पर्छ भन्ने होइन । हाम्रो आवश्यकता के हो भने जुन सामान्य परिवेशका मान्छेले खेलकुदलाई जोगाउनु भयो, उहाँहरुको आत्मीयता, सामीप्यता अझ रहन जरुरी छ । यसकारण रोल्पा ठूला शहर भन्दा उपयुक्त, आवश्यकता स्थान होे । रोल्पा जस्तै अन्य ठाउँ पनि हुन सक्थे । तर, रोल्पा जिल्ला मार्शल आर्ट्स हाप्किडो संघले आयोजनाको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न तयार भए पछि केन्द्रिय समितीले यसलाई साथ दिएका हो । हामी शशक्तिकरण कुरा धेरै गर्छौ । ब्वयबहारमा कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइ गर्छौ । जुन गलत हो । जहाँ सम्म महिला शशक्तिकरणको कुरा छ, हामीले एक जना महिलालाई यो बृहद राष्ट्रीय आयोजनाको नेृतत्वको जिम्मेवारी सुम्पीएर हामीसंग आवद्ध महिलाहरु कोटा पुरा गर्नका लागि होइन, जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै पनि तहमा रहनु भएको छ भन्ने पुष्टि गर्दैछौ । यस अर्थमा पनि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनेछ ।
आयोजनाको नेतृत्वको जिम्मेवारी कसले लिनुभएको छ ?
यो जिम्मेवारी रोल्पा मार्शल आर्ट्स हाप्किडो संघका अध्यक्ष यमुना घर्ती मगरले लिनुभएको छ । भने आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामीले सामुहिक रुपमा गरेका छौ । स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा पनि । नेपाली खेलकुदका थुप्रै यथार्थ यो एउटा अन्तरवार्तामा भन्न असान्दर्भिक हुन्छ । तर, के हो भने यो बृहद कार्यक्रम सफल बनाउन परिवर्तन गाउँपालिका र ५ नं प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका रहने छ ।
एउटा गाउँमा हुने प्रतियोगितामा व्यवस्थापनमा कमी त हुदैन ?
नेपालीमा यही एउटा सोचमा कमजोरी हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालका कुनै पनि गाउँ कुनै ठूला प्रतियोगिता गर्न असमर्थ छन् भन्ने होइन । सामान्य सुविधा छ । मौसम वातावरण अनुकल छ, मैदान छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त आत्मीय संस्कार छ । यो रोल्पाको कुरा होइन, सबै नेपाली गाउँको कुरा हो । यहाँ संसारका सवै मानिस रमाउन सक्छन् भने हामी नेपालका सबै मान्छे किन नसक्ने ? म बिश्वस्त छु, रोल्पाको यो कार्यक्रम नेपालकै ऐतिहासिक र पृथक हुने छ ।
राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप त गर्न लाग्नुभएको छ । नेपालमा यस खेलको प्रभाव चाहि कत्तिको छ ?
म नेतृत्वमा आएको तीन वर्ष नाघेको छ । हाम्रो उपस्थिति कत्ति छ भन्ने कुरा ५० वर्ष भन्दा बढी नेपालमा इतिहास भएका खेलसँग हामी दाँजिन चाहदैनौ । यसको अर्थ पनि छैन । तर, यो तीन वर्ष हामी यत्ति फराकिलो दायरामा छौ कि यही गतिमा जादाँ अबको केही समयमा हाम्रो खेल नेपालको प्रभावशाली खेल हुने छ । यही बाटोको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा यो च्याम्पियनसिप रहने छ ।
अन्य खेल भन्दा यहाँहरुको खेलमा विशेषता ?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा के हो भने आर्थिक कुरा नेपालीको मुल समस्या हो । खेलाडी मात्र होइन धेरै नेपालीको हो । यो समाधान गर्ने काम राज्यको नै हो । तर, हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रारम्भिक सुरुवात कसरी गर्न सक्छौ भन्ने हो । हामीले पदकका साथमा सानो टोकन मनी भए पनि व्यवस्था गरेका छौ । यो पूर्ण होइन । तर, सकरात्मक सुरुवात हो । यो वातावरण वनाउने कुरामा मुख्य प्रायोजकको रुपमा रहेको परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा यसका अध्यक्ष निमकान्त डागीँ (जितजंग) र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
तपाइँलाई राम्रो सहयोग गर्नु भयो त्यसो भए ?
मैले मलाई भन्दा पनि हाम्रो खेलको विकास विस्तार क्रमलाई सहयोग गर्नु भयो भनेर बुझेको छु । म संघ अध्यक्ष भएका नाताले उहाहँरुको यो भुमिकामा कृतज्ञ भएको हुँ । मैले उहाँहरुलाई बुझ्दा इमानदारिता, अनुसाशित र सकरात्मक काम गर्न चाहनेलाइ सहयोग गर्ने व्यक्तिको रुपमा बुझेँ । साथै खेल क्षेत्र प्रति माया र सद्भाव भएको व्यक्तित्वको रुपमा उहाँहरुलाई बझुेको छु ।
अन्त्यमा के भन्नु चाहनु हुन्छ ?
मैले भन्ने कुरा के भने हरेक खेलको विकास कुनै पनि ठाउँमा एक दिनमा हुने होइन । लामो समयसम्म धेरैको त्याग समर्पण र मिहेनतले स्थापित हुने हो । हामी एक दिन नेपाली समुदायमा राम्रो संग स्थापित हुने छौ । त्यो समयमा पनि यो प्रतियोगिता र यो सस्करणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने र सहयोग गर्ने सवैको समर्पण, त्याग र सहयोगको अर्थ रहने छ ।